Yan Aung: သင်္ကေတ
“နာရီစင်က သုံးချက်တီးသံမြည်….. နှင်းတွေလည်း ကျနေသည်… ဒီဆောင်းမြောက်လေ မြူးသည်… ခုတော့သိပြီ.. မင်းကို ကိုယ်ချစ်သည်….”
ဦးဥာဏ်က အစ်မကို ဒီသီချင်းလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဂစ်တာ
တီးသီချင်းဆိုပြီး တိပ်ခွေတစ်ခွေအပြည့် လက်ဆောင်ပေးပြီး ပိုးခဲ့တာလေ။ :D
မရီတာရဲ့ ကွန့်မင့်ကို သဘောကျသည်။
လက်စသတ်တော့ မကြီးမငယ်နှင့် သစ်ပင်ပေါ်မှ တက်ချောင်းနေသည်ကိုးးးး
>မ၀ါ... ပြန်သတိရသွားတယ်ပေါ့လေ.း)
>ရီတာ... အမေ့ခံကြည့်တာပါ. ဘယ်လောက်များ ကိုယ့်အပေါ်ကို ခင်တွယ်ကြလဲ သိချင်လို့. တစ်ချို့ကတော့ တကယ်ကို မေ့သွားကြပြီထင်ပါရဲ့.
>မလေး... သစ်ပင်ပေါ်က တက်ချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ. Character ကိုယ်တိုင်က သစ်ပင်လေး ဖြစ်နေတာပါ.း) ကော်မန့်နှစ်ခုအတွက် Double Thanks...